Ogaden News Agency (ONA) – Maraykanka oo Sheegay Inuu Tilaabo Ka Qaadayo Sacuudiga.
Maraykanka oo Sheegay Inuu Tilaabo Ka Qaadayo Sacuudiga.
Posted by Dayr	/ October 25, 2018
Dowlada Maraykanka ayaa markii ugu horeysay sheegtay inay tilaabo ka qaadi doonaan dowlada Sacuudiga oo loo heysto dilkii Suxufi Jamal Khashoggi oo ka dhacay qunsuliyada Sacuudiga ku leeyahay magaalada Istanbul.
Trump ayaa sheegay in qaabka dilkan u dhacay uu ahaa mid fool xun, isagoona sheegay inay kasii fool-xumeyd qaabkii ay Sacuudiga isugu dayeen inay qariyaan. Cambaareynta Trump ayaa kusoo beegantay xili ay dalka Turkiga ku sugan tahay Madaxa Sirdoonka Maraykanka ee CIA oo halkaasi u tagtay inay wax ka ogaato cadeynmaha ay Turkiga hayaan ee aan weli la shaacin.
Hadalka Maraykanka ayaa soo baxay kadib khudbadii Madaxweynaha Turkiga Tayyib Erdogan uu daraad kasoo jeediyey Baarlamaanka dalkiisa, isagoona Sacuudiga ugu baaqay inay gacanta usoo geliyaan kooxda dilka geysatay lana ciqaabo Madaxda sare ee dilkaasi amartay.
Dhinaca kale Wasaarada Arrimaha Dibada ee Maraykanka ayaa sheegtay inay dalkeeda ka mamnuucday 21 xubnood oo u dhashay dalka Sacuudiga oo isugu jira xubno xilal sare haya iyo waliba saraakiil ka tirsan Sirdoonka ee la sheegay inay dilkii Khashoggi ku lug lahaayeen.
Xoghayaha Arrimaha Dibada ee Maraykanka, Mike Pompeo ayaa talaadadii shir jaraa’iid uu qabtay ku sheegay inay halkaasi ku ekaan doonin tilaabada Sacuudiga laga qaadayo oo ay jiraan tilaabooyin-kale oo dheeraad ah oo ay dhawaan shaacin doonaan.
Kongareeska dalkaasi Maraykanka ayuu hada ka socdaa dhaq dhaqaaq xoog leh oo ay wadaan qaar kamid ah Xildhibaanada labada xisbi ee dalkaasi oo si weyn u dhaliilsan siyaasada Maxamed Bin Salman, Dhaxal-sugaha Boqortooyada Sacuudiga oo lagu eedeenayo dilkii Jamal Khashoggi, waxay sidoo kale doonayaan in la joojiyo tageerada Maraykanka siiyo Sacuudiga ee dagaalka Yemen iyo waliba in la qaado Xayiraada Saaran dalka Qatar.